Apache: nzira dzakavhurika-sosi kune iyo quintessential web server | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, Free Software, Linux software
Iyo yakanakisa software yekushandisa a servidor web zvirokwazvo iApache. Ndiyo pasuru par kugona iyo inoshandiswa mumaseva mazhinji eGNU / Linux nechinangwa chekugadzira iyi mhando yemasevhisi ekuisa zvirimo. Asi handiyo chete chirongwa cheichi, muchokwadi, kune zvimwe zvinonakidza izvo zvakanaka yakavhurwa sosi dzimwe nzira.
Imwe yeanonyanya kuzivikanwa mushure meApache ndiNginx, asi kune zvimwezve. Naizvozvo, mune ino chinyorwa ini ndicharatidza zvese zvakasiyana-siyana zvaunazvon kana iwe uchida kumisikidza yako yega dura rewebhu. Imwe neimwe ine zvayakanakira nezvayakanakira, sezvazvinoitika kune ese mapurojekiti. Saka iwe unofanirwa kuongorora kuti ndeipi yakanakira iwe zvinoenderana nezvaunoda ...
Vamwe dzimwe nzira unofanirwa kukwira sevha yewebhu paGNU / Linux:
Apache HTTP Server: ndeimwe yeanesimba uye imwe yeanonyanya kushandiswa pasi rese. MuDEB distros inowanzoidaidzwa kuti apache2 package, nepo muRPMs inozivikanwa se httpd. Iyo yakavhurika sosi uye yemahara, yakavandudzwa pasi peApache Software Foundation uye pasi peApache v2 rezinesi. Yakavambwa muna 1995 uye kubvira ipapo yakawana chikamu che37% chemawebhusaiti aripo (mazhinji acho ane mukurumbira). Iyo yakanyorwa mumutauro weC uye yakanyatsogadziriswa nekuda kwemamodule ayo anowedzera kugona kwayo. Uye zvakare, inotsigira mapuroteni akadai seHTTP, HTTP / 2 uye HTTPS, pamusoro pePv4 neIPv6.
Nginx Webhu Server: Inodudzwa se "injini-x" uye zvakare yakavhurwa sosi, kushanda kwakanyanya, yakasimba, inokwanisa kutakura mutoro, zvichingodaro. Yakagadzirwa muna 2004 naIgor Sysoev uye zvishoma nezvishoma yave ndiyo nzira yakanyanya kushandiswa mushure meApache, ine mugove we31% pakati payo pane mamwe mawebhusaiti akaita seLinkedIn, Adobe, Xerox, Facebook, Twitter, nezvimwe.
Lighttpd Web Server: Seizvo zita rayo rinoratidzira, iyi yakavhurwa sosi purojekiti yakanyatsogadzirirwa kuve isingaremi. Yakanaka yezvikumbiro uko kumhanyisa kunodiwa. Kusiyana neApache neNginx, idiki kwazvo pa1MB chete uye inoda zvishoma CPU neyekuchengetedza zviwanikwa. Iri pasi peBSD rezinesi uye inokwanisa kutsigira HTTP, kumanikidza, SSL / TLS, nezvimwe. Iyo ine ma module ekuwedzera mashandiro ayo.
Apache Tomcat: iko kuvhura kuitiswa kwakanyorwa muJava pasi peApache rezinesi. Yakanaka kune vanogadzira vanogadzira Java-based apps. Haisi yakajairika dura rewebhu seaya ari pamusoro, asi yeJava servlet.
OpenLiteSpeed ​​Web Server- Imwe yakavhurika-sosi purojekiti yakagadzirirwa kukurumidza, yakapusa, yakachengeteka, uye yakagadziriswa. Kubva paLiteSpeed ​​Enterprise Web Server, asi iine yakakosha repertoire yemabasa achienzaniswa neiyo edition. Iyo ine hushamwari WebAdmin GUI, uye inokwanisa kumhanya yakatambanuka yakawanda yePerl, Python, Ruby, uye Java zvinyorwa. Ehe, inotsigira IPv4, IPv6, uye SSL / TLS mune dzakasiyana shanduro (1.0 kusvika 1.3).
Hiawatha Web Server: web server yakanyorwa neC mutauro, isina kureruka uye yakachengeteka. Kunyanya kune avo vari kutsvaga kumhanya, chengetedzo uye nyore kushandisa. Iyo yakachengeteka kwazvo kurwisa XSS uye SQL Jekiseni kurwisa. Uye zvakare, iyo inobvumidza kusevha yekutarisa neyakakosha chishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Apache: nzira dzakavhurika-sosi kune webhu saiti par kugona
Mhoro, chinyorwa chakanaka.
Ndinoda kuwedzera Cheerokee Web Server. Inoshanda zvikuru uye kunyangwe nguva pfupi yadarika isina rutsigiro rwakawanda iri rakareruka chaizvo uye rakakodzera kutaurwa nezve kuita kwayinopa iine zviwanikwa zvishoma. Zviri nyore kwazvo kumisikidza, iine Administration WebUI.
Ndatenda nekuverenga isu uye nekomendi yako. Ehe, chokwadi ndechekuti kune zvimwe ... Dzimwe nguva zvinonetsa kusarudza kuti ndeapi ekupinda kana kwete paunogadzira zvinyorwa.